Saafi Films - News: Daawo Sawiro:- Hay�ada Qaxootiga ee qaramada midoobay waxa ay sheegaty in kumanaan qof ay kasii talaabayaan xaduuda wadanka Syria
Daawo Sawiro:- Hay�ada Qaxootiga ee qaramada midoobay waxa ay sheegaty in kumanaan qof ay kasii talaabayaan xaduuda wadanka Syria
Hay�ada Qaxootiga ee qaramada midoobay waxa ay sheegaty in kumanaan qof ay kasii talaabayaan xaduuda wadanka Syria.
Hal Milyon oo shacabka Syria ah ayaa waxa ay kacararayaan dagaalada kasoconaya wadanka tan iyo markii ay rabshadaha dheeraaday ay kabilaawdeen wadanka laba sano kahor, hey�ada qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegatay. Hey�ada UNHCR ayaa waxa ay sheegtay maalintii arbacada in ay wadanka kabaxeen dad tiradooda lagu qayaasay kumanaan iyo in kabadan, dadkan ayaa waxa ay ka baxsanayaan colaadaha fogaaday ee ka jira dalka Syria.
�Hal milyon ayaa dalka kaga baxay diyaarad,Tira kabadan Malaayiin waxa ay ku barakaceen gudaha wadanka kumanaan kalane waxa ay maalin waliba kasii talaabaan xaduuda ayadoo xaalad bani�aadanimo ay soo wajahday�sidan waxa sheegay Antonio Guterres oo ah madaxa uqaabilsan qaxootiga UNHCR. UNHCR waxa ay sheegtay in 40,000 oo shacabka Syria ahi ay ka baxeen wadanka tan iyo January 1,hal sano kahor,Hey�adaha qaramada midoobay waxa kaliya ay Register-gareeyeen 33,000 oo qof oo qaxooti ah.
Ciidamada daacada u ah Al-Asad waxa ay dagaal kula jiraan kooxaha dagaalka kala soo horjeeda,ayagoo kooxahani ay qabsadeen magaalooyin badan oo koonfurta wadanka ka mid ah,sidoo kale waxa ay qaramada midoobay sheegtay in ay dagaalka ku dhinteen 70,000 oo qof.
Dowlada Turky-ga ayaa waxa ay siisay qaxootiga jooga halkaa $600 Milyon oo Dollar si loogu dhiso 17 xero oo qaxooti ladajinayo. Haajir Elmi
samira on March 07 2013 ·
4,503,176 unique visits